I-35 YEENWELE EZIBALASELEYO ZABAFANA ABAKWISHUMI ELIVISAYO - IINWELE ZAMADODA
I-35 yeeNwele eziBalaseleyo zaBafundi abaFikisayo
Eyona Iinwele Zamadoda I-35 yeeNwele eziBalaseleyo zaBafundi abaFikisayo
Iinwele zabafana abakwishumi elivisayo zihle ngakumbi, zinobuhlobo kwaye ziyoyikeka kunanini na ngaphambili. Ngeenwele zolutsha ezisukela kwiklasikhi ukuya kwezanamhlanje, ezimfutshane ukuya ezinde, kunye nokuzilolongela endle, amakhwenkwe akwishumi elivisayo ane…
Iinwele zabafana abakwishumi elivisayo zihle ngakumbi, zinobuhlobo kwaye ziyoyikeka kunanini na ngaphambili. Ngeenwele zolutsha ezisusela kwiklasikhi ukuya kwezanamhlanje, ezimfutshane ukuya ezinde, kwaye zigcina indalo endle, amakhwenkwe akwishumi elivisayo awakaze abe nokusikwa okupholileyo kunye nezitayile onokukhetha kuzo. Ngapha koko, ukuba ujonga iintlobo zeenwele ze-badass kulutsha, ungasithanda esi sikhokelo sezona ndlela zokutshisa iinwele zamakhwenkwe zishushu!
1Ukucheba iinwele kwabafana abancinci
MbiniIinwele ezipholileyo zaBafundi abaDala
2.1Inxalenye enzima yokudibanisa ngaphezulu + kweTaper Fade
2.2I-Quiff yanamhlanje + yokuPhela okuPhakamileyo + kumgca woyilo lweenwele
2.3I-Undercut Fade + Line Up + Spiky Faux Hawk + Uyilo
2.4Ukuphela kweTaper ephezulu + kwicala elibhaliweyo elitshisiweyo
2.5Ikama elide ukudlula + ngaphantsi
2.6Phakathi koLusu luphela + ePompadour + kwiindevu
2.7Ulusu olusezantsi + luphela ngobuqhophololo
2.8Ukuphela + kweNwele eziMiselweyo zeNwele + iindevu
2.9Ukucheba okuphezulu kweBald + yokuCoca iiCrew
2.10I-Undercut + Shape Up + Brush Back
2.11I-curly Fringe ende + iTaper ephezulu
2.12Ukucheba okuPhezulu okuPhezulu + okuMfutshane okuPhezulu + kuBhrashi ngaphambili
2.13I-Razor Fade ePhakamileyo + yeenwele eziCociweyo
2.14Utyikitye umva Undercut
2.15Ukuphela + koyilo lweenwele + Izinwele eziPeyintiweyo ezibunjiweyo
2.16Ukuphela kweTempile +
2.17I-Taper yesiqhelo + Imilo ephezulu + yeFohawk
2.18Amacala amafutshane + Iinwele ezinde eziMessi ePhezulu
Ukucheba iinwele kwabafana abancinci
Ezona zinwele zifanelekileyo zolutsha ziqala ngeenwele ezimfutshane emacaleni. Oku kuthetha ukufumana kutsha ukubuna okanye ngaphantsi . Nangona kunjalo, abafana banokukhetha okuninzi xa kuziwa kudidi lokufiphala abaluthandayo. Umzekelo, amakhwenkwe akwishumi elivisayo anokukhetha ukuphakama, isezantsi , phakathi , ulusu , ukuhla , incakuba, ugqabhuke okanye ukuphela kwetempile . Umahluko nokwahluka phakathi kwezi ziphelayo kuya kuboniswa ngezantsi!
Isinyathelo esilandelayo kukugqiba indlela yokunquma kunye nokuthayipha iinwele zakho phezulu. Ezona nwele zamadoda zithandwayo kulo nyaka zibandakanya iindlela ezinde zokucheba iinwele ngenkangeleko yendalo, enombala. Oku kuthetha ukuba uyakufuna ipomade elungileyo ngokugqitywa kwe-matte ukuya kwisitayile sakho, ipompadour, ikama ngaphezulu , umphetho, ispiked okanye enye ubude obuphakathi iinwele.
iinwele zamadoda iinwele ezimfutshane
Nangona kunjalo, ukuba unwele olulula, olusezantsi, emva koko ukusika kwe-buzz , abasebenzi bayasikwa kwaye izitayile ezimdaka zinokusebenza nazo! Izinwele ezimfutshane zamadoda zihlala zihamba kakuhle phakathi kwabafana abakwishumi elivisayo abangafuni kutyala ixesha lokuloba iinwele zabo kusasa.
Iinwele ezipholileyo zaBafundi abaDala
Ukuphefumlelwa, nolu uluhlu lwethu lweenwele ezipholileyo kulutsha!
Inxalenye enzima yokudibanisa ngaphezulu + kweTaper Fade
I-Quiff yanamhlanje + yokuPhela okuPhakamileyo + kumgca woyilo lweenwele
I-Undercut Fade + Line Up + Spiky Faux Hawk + Uyilo
Ukuphela kweTaper ephezulu + kwicala elibhaliweyo elitshisiweyo
Ikama elide ukudlula + ngaphantsi
Phakathi koLusu luphela + ePompadour + kwiindevu
Ulusu olusezantsi + luphela ngobuqhophololo
Ukuphela + kweNwele eziMiselweyo zeNwele + iindevu
Ukucheba okuphezulu kweBald + yokuCoca iiCrew
I-Undercut + Shape Up + Brush Back
i-bicep tattoos yamadoda
I-curly Fringe ende + iTaper ephezulu
Ukucheba okuPhezulu okuPhezulu + okuMfutshane okuPhezulu + kuBhrashi ngaphambili
I-Razor Fade ePhakamileyo + yeenwele eziCociweyo
Ukuphela + koyilo lweenwele + Izinwele eziPeyintiweyo zeSpiky
Ukuphela kweTempile +
I-Taper yesiqhelo + Imilo ephezulu + yeFohawk
Amacala amafutshane + Iinwele ezinde eziMessi ePhezulu
Izitayile zeDreadlock zaMadoda
Indlela yokusinda kunye nokuphumelela ngexesha lokubuya kwakho kweSaturn
ukuphuma kunye neempawu zenyanga
Icala elifutshane amadoda aphezulu aphezulu
ukuchetywa kweenwele kwimilo yobuso yamadoda